Ukufakwa kweMpawu zoMatshini Indlela yokufaka itywina yoomatshini iyahluka ngohlobo lwetywina loomatshini kunye nohlobo lomatshini, kodwa ukufakwa okubalulekileyo kuphantse kwafana. Itywina Mechanical yenye m esisiseko ...
Ulwazi ngokuHlolwa kweTywina leRubber 1. Zeziphi izinto zokuhlola amatywina erabha? 1) Jonga ukuba imveliso icocekile. 2) Jonga ukuba imveliso ineziphene ze-vulcanization; I-3) Jonga ukuba imveliso iyalungisa / ya ...
Umahluko phakathi kweemveliso zerabha ezibunjiweyo kunye neemveliso ezikhutshiweyo
Umahluko phakathi kweemveliso zerabha ezibunjiweyo kunye neeMveliso eziPhucukileyo Ngophuhliso olukhawulezileyo lweshishini lokuvelisa, iimveliso zerabha zisetyenziswa ngokubanzi. Ngeemveliso zerabha nezeplastiki ezinokubonwa kuyo yonke indawo, ...